သွေးလှူချင်သူများ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ - Thutazone
သွေးလှူချင်သူများ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
ရေးသားသူ – ဝင်းသု
သွေးလှူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယူအဆအမှားတွေ အတွေးအမှားတွေ အများကြီးကြုံဖူးကြားဖူးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို အယူအဆအမှား အမြင်အမှားတွေကြောင့် သွေးလှူနိုင်ရဲ့သားနဲ့ သွေးမလှူဖြစ်တဲ့လူတွေ အများကြီးပါပဲ။ မွန်မြတ်ဖြူစင်လှတဲ့ လှူဒါန်းမှုတစ်ခုကို လူတွေက လုပ်ချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုအချက်တွေက တားဆီးထားသလဲ။
၁။ သွေးလှူပြီးရင် ၀ လာမယ်။
တကယ်တော့ သွေးလှူတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် တိုးလာပြီး ၀ လာတာမျိုး မရှိပါဘူး။ အသားအရည် စိုပြေပြီး အလှတိုးတာပဲ ရှိပါတယ်။ သွေးလှူထားတာကြောင့် အားပြန်ဖြည့်ဖို့ဆိုပြီး ပုံမှန် စားသောက်တာထက် ပိုပြီး စားဖို့သောက်ဖို့လည်း မလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်အတိုင်းပဲ စားသောက်နေထိုင်ပါ။ အဲဒီလိုဆို အရင်ကထက် ပိုပြီး ၀ လာစရာ မရှိပါဘူး။
၂။ သွေးလှူတာကြောင့် ရောဂါကူးမယ်။
တကယ်တော့ သွေးဖောက်ယူတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ အပ်တွေ၊ သွေးအိတ်တွေ၊ ပစ္စည်းကိရိယာတွေဟာ သန့်ရှင်းပါတယ်။ သွေးဖောက်တဲ့အခါမှာ တစ်ခါသုံးအပ်တွေကို သုံးထားပါတယ်။ သွေးဖောက်ပေးတဲ့ သူနာပြုတွေကလည်း တစ်ခါသုံး လက်အိတ်တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ အစအဆုံး စနစ်တကျ ရှိလှတဲ့အတွက် သွေးလှူရှင်တွေအနေနဲ့ ရောဂါပိုးကူးစက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
၃။ သွေးလှူပြီးရင် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မယ်။
တကယ်တော့ သွေးမလှူခင်မှာတင် ဆရာဝန်က သွေးလှူရှင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အရင်စစ်ဆေးပေးပါတယ်။ သွေးလှူဒါန်းဖို့ သင့် မသင့်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်မှ သွေးပေးလှူတာပါ။ ဒါပေမယ့် သွေးလှူပြီးရင်တော့ ကုတင်ပေါ်မှာ မိနစ် အနည်းငယ်လောက်တော့ အနားယူသင့်ပါတယ်။
၄။ သွေးဖောက်တဲ့အခါ အပ်ကြီးကြီးကြောင့် နာမယ်။
တကယ်တော့ နာတယ်ဆိုတာ အရမ်းနာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နားဖောက်တာလောက် သွားနှုတ်တာလောက် မနာပါဘူး။ ပုရွတ်ဆိတ် ကိုက်ရင်တောင် ဒီထက်ပိုနာပါတယ်။ တစ်ခုလောက် သတိရစေချင်တာက သွေးလှူဖို့ အပ်ထိုးတဲ့အချိန် နာတဲ့ နာကျင်မှုဒုက္ခက သွေးလိုနေတဲ့ လူနာရဲ့သွေးမရရင် ခံစားရမယ့် နာကျင်မှုဒုက္ခနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဘာမှ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။
၅။ သွေးလှူရတာ အချိန်ကုန်မယ်။
တကယ်တော့ သွေးလှူတာ အစအဆုံးက အလွန်ဆုံး တစ်နာရီ ပတ်ဝန်းကျင်ပဲ ကြာပါတယ်။ အဲဒီ တစ်နာရီမှာ လိုအပ်တဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ ဖြည့်ရတာတွေ၊ မေးခွန်းတွေ ဖြေရတာတွေ၊ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု ခံယူရတာတွေက အချိန်အများဆုံး ယူသွားပါတယ်။ သွေးလှူတဲ့အချိန်က ၁၀မိနစ် ပတ်ဝန်းကျင်ပဲ ရှိပါတယ်။
၆။ သွေးလှူတဲ့အခါ သွေးအများကြီး ဖောက်ယူခံရမယ်။
တကယ်တော့ သွေးအများကြီး ဖောက်မယူပါဘူး။ သွေးလှူရှင်ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်အပေါ် မူတည်ပြီး ၄၀၀ မီလီလီတာကနေ ၄၅၀ မီလီလီတာကြားပဲ ယူပါတယ်။ အဲဒီထုတ်ယူလိုက်တဲ့ သွေးပမာဏကို ခန္ဓာကိုယ်က အချိန်ပိုင်းအတွင်း ပြန်လည် ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။
၇။ ကျွန်တော် သွေးလှူဖို့ မလိုဘူး။ သွေးလှူရှင်တွေက အများကြီးပဲလေ။
တကယ်တော့ လူနာတွေအတွက် သွေးလှူရှင် လိုနေပါတယ်။ သွေးလှူလို့ရနိုင်တဲ့ လူဦးရေ စုစုပေါင်းရဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကပဲ သွေးလှူနေကြတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို ဒီထက်နည်းပါတယ်။ သွေးကို အစားထိုးဖို့အရာ မပေါ်သေးပါဘူး။ သက်ရှိလူသားဆီကပဲ ရနိုင်တဲ့အတွက် သွေးလှူရှင်တွေ အများကြီး လိုနေပါတယ်။
၈။ သွေးဆိုတာ အကြာကြီး အထားခံတယ်။ တစ်ခါ လှူပြီးရင် လုံလောက်တယ်။
တကယ်တော့ အေးခဲထားတဲ့ သွေးရည်ကြည်ဟာ ၁ နှစ်တိတိ သိမ်းထားလို့ရပါတယ်။ သွေးနီဥကို သာမာန် အခြေအနေမှာ ၄၂ ရက်တိတိ သိုလှောင်နိုင်ပါတယ်။ သွေးဥမွှားကတော့ ၅ ရက်ပဲ အထားခံပါတယ်။ အဲဒီလို အထားခံပေမယ့် လူနာတွေရဲ့ သွေးလိုအပ်ချက်က များလွန်းတဲ့အတွက် လှူထားတဲ့သွေးတွေ သွေးဘဏ်မှာ အဲဒီလောက်တောင်ကြာကြာမထားလိုက်ရပဲ လူနာတွေဆီကို သွေးသွင်းကုသပေးလိုက်ရတာ များပါတယ်။ ဒါကြောင့်သွေးဘဏ်မှာ သွေးအိတ်တစ်ခုကို အကြာကြီး မမြင်ရပါဘူး။
၉။ ဘာသာတရားကြောင့် သွေးလှူလို့မရဘူး။
တကယ်တော့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားတိုင်းလိုလို
ဗုဒ္ဒဘာသာ-ဗုဒ္ဒဘာသာမှာ ပါရမီ(၁၀)ပါးရှိပါတယ်.သွေးလှူဒါန်းခြင်းဆိုတာ ပါရမီ (၁၀)ပါးတစ်ပါးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ လှူဒါန်းခြင်းဒါနပါရမီဖြစ်သလို.သွေးဖောက်စဉ်ခဏနာကျင်မှုကို သည်းခံရတဲ့အတွက် ခန္ဒီပါရမီလည်းဖြစ်ပါတယ်..ဒါကြောင့် သွေးလှူဒါန်းခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ ပါရမီကို ရင့်သန်သထက်ရင့်သန်စေရန်ဖြည့်နိုင်ကြပါစေ…
ခရစ်ယာန်ဘာသာ-ခရစ်တော်ကဟောကြားခဲ့ပါတယ်.’ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်သူတိုင်းကို ကိုယ်နှင့်အတူချစ်အံ့’..လူလောကမှာနေထိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တခြားလူတယောက်ရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ခြင်းဟာ ခရစ်တော်ရဲ့ အဆုံးအမအတိုင်းချစ်ရာရောက်ပါတယ်.
မွတ်ဆလင်နှင့် ဟိန္ဒူဘာသာ- မွတ်ဆလင်နှင့် ဟိန္ဒူဘာသာ မှာလည်း ကုသိုလ်ဒါနပြုမှုကို အားပေးချီးမြှောက်ထားပါတယ်။အမှန်တော့ သွေးလှူတယ်ဆိုတာ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ မွန်မြတ်ဖြုစင်တဲ့ လှူဒါန်းမှုတစ်ခုဖြစ်သလိုတပါးသူတဦးရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ခြင်းဇီဝတဒါန လှူဒါန်းမှုတစ်ခုပါ။
အခုပြောသွားတဲ့ အချက်တွေကြောင့် သွေးမလှူဖြစ်ခဲ့တာပါဆိုရင် နောက်ရက်တွေက စပြီး လူ့အသက်တွေကို ကယ်ဖို့အတွက် ဒီစာကို တစ်ခါလောက် အစအဆုံး ပြန်ဖတ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
သွေး အကြောင်း စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်များ
ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ သာမန်လူတစ်ယောက်ဟာ (၄)လတစ်ကြိမ်နှင့် တစ်နှစ်ကို (၃)ကြိမ်သွေးလှူဒါန်းလို့ရပါတယ်။ သွေးကို အစားထိုးလို့ရတဲ့အရာ မပေါ်သေးပါဘူး။ သွေးဟာ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်ရဲ့ ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ရှိပါတယ်။ သွေးဟာ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေကို သယ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ သွေးဟာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နဲ့ အညစ်အကြေးဓါတ်များကို စွန့်ထုတ်ဖျက်ဆီးစေဖို့အတွက် အဆုတ်၊ ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းတွေဆီကို သယ်ဆောင်ပေးသွားပြန်တယ်။
သွေးဟာ ရောဂါတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးပြီး ဒဏ်ရာတွေ အနာတွေ ကျက်စေဖို့ ကူညီပေးသေးတယ်။အေ၊ဘီ၊ အေဘီ၊ အို ဆိုပြီးတော့ အဓိက သွေးအမျိုးအစားအုပ်စုကြီး လေးခုရှိပါတယ်။ သွေးအမျိုးအစားတိုင်းမှာ မျောက်သွေးလို့ခေါ်တဲ့ RH အပေါင်း အနုတ် ဆိုတာလည်း ရှိပြန်သေးတယ်။
သွေးထဲမှာ သွေးနီဥ၊ သွေးဖြူဥ၊ သွေးဥမွှားနဲ့ သွေးရည်ကြည်ဆိုပြီး အဓိက ၄ မျိုးပေါင်းစပ်ပါဝင်နေတယ်။ သွေးဖြူဥဟာ သွေးဆဲလ်ထဲမှာ အကြီးဆုံးပါပဲ။ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို တိုက်ထုတ်ဖို့ တာဝန်ယူပေးထားပါတယ်။ သွေးဖြူဥတွေရဲ့ သက်တမ်းဟာ တိုလွန်းလှပါတယ်။ ရက်အနည်းငယ် ဒါမှမဟုတ် တစ်ပတ်လောက်ပဲ သက်တမ်းရှိပါတယ်။ သွေးစက်လေးတစ်စက်မှာ သွေးဖြူဥဆဲလ်ပေါင်း ခုနစ်ထောင်ကနေ နှစ်သောင်းခွဲအထိ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထဲကို ဝင်လာတဲ့ ရောဂါပိုးက ပြန်လည်ခုခံတယ်ဆိုရင် သွေးဖြူဥဆဲလ် အရေအတွက် ဒီထက်မက များပြားလာတတ်ပါတယ်။
သွေးနီဥဟာ သွေးပမာဏရဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ရှိပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေကို အဓိက သယ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓါတ်တွေကို အဆုတ်ကို ပြန်လည် သယ်ယူပေးပြန်တယ်။
သွေးဥမွှားက အသေးငယ်ဆုံး သွေးဆဲလ်လေးတွေပါ။ သွေးပမာဏရဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းက ၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိဟာ သွေးဥမွှားလေးတွေပါ။ သွေးဥမွှားတွေက ဒဏ်ရာ အနာတရဖြစ်တဲ့အခါမှာသွေးခဲစေပြီး သွေးယိုထွက်ခြင်းကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
သွေးရည်ကြည်က စေးကပ်ကပ်ရှိလှတဲ့ အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ အရည်လေးပါ။ သွေးပမာဏ စုစုပေါင်းရဲ့ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ သွေးရည်ကြည်တွေပါ။ သွေးရည်ကြည်ထဲမှာ ရေဓါတ်၊ ဆားဓါတ်နဲ့ ပရိုတင်းဓါတ်တွေ ပေါင်းစပ် ပါဝင်နေပါတယ်။ သွေးရည်ကြည်ရဲ့ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းက ရေတွေပါ။ ကျန်တဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းက ဟိုမုန်းဓါတ်တွေ၊ ဆားဓါတ်နဲ့ ပရိုတင်းဓါတ်တွေပေါ့။
သွေးနီဥဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရက်ပေါင်း ၁၂၀ အထိ သက်တမ်းရှိပါတယ်။ သွေးနီဥကို သာမာန်အခြေအနေမှာ ၄၂ ရက်တိတိ သိုလှောင်ထားလို့ရပါတယ်။ အေးခဲထားတဲ့ သွေးနီဥတွေဆိုရင် ၁၀ နှစ်နဲ့ အထက် သိမ်းထားလို့ရပါတယ်။ သွေးဥမွှားကတော့ ၅ ရက်အတွင်း အသုံးပြုရပါတယ်။ သွေးဥမွှားကို သွေးကင်ဆာနဲ့ တခြားကင်ဆာရောဂါတွေရဲ့ သွေးသွင်းကုသမှုမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
သွေးရည်ကြည်ဟာ သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းတဲ့နေရာမှာ ကူညီပေးပါတယ်။ သွေးဆဲလ်တွေ၊ ဟိုမုန်းဓါတ်တွေ၊ အင်ဇိုင်းတွေကိုလည်း သယ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ သွေးခဲစေဖို့အတွက်နဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းဓါတ်ကိုလည်း သယ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ေ အးခဲထားတဲ့ သွေးရည်ကြည်ဟာ ၁ နှစ်တိတိ ထားလို့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Whole blood donation လို့ခေါ်တဲ့ အများသိကြတဲ့ သွေးလှူဒါန်းမှုကိုသာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်. ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာတော့ Whole blood donation,Plasma donation,Platelet donation ဆိုပြီး ခွဲခြားလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
အခု အပိုင်းကတော့သွေးလှူရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချက်တွေနဲ့ သွေးလှူဒါန်းခြင်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့သွေးအမျိုးအစားစစ်ဆေးခြင်း၊သွေးလှူရှင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း၊သွေးထုတ်ယူခြင်း၊ အာဟာရဖြည့်တင်းခြင်းဆိုတဲ့ အဆင့်ဆင့်ကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ သွေးလှူဒါန်းခြင်းမပြုနိုင်တဲ့သူတွေအကြောင်းလည်းရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ သွေးလှူရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကိုယ့်မှာသန့်ရှင်းတဲ့သွေးပိုင်ဆိုင်ဖို့နဲ့ ဟေမိုဂလိုဘင်လို့ ခေါ်တဲ့ သွေးအားပြည့်မှုတွေရှိမှ လှူဒါန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.
အခုမှစတင်လှူဒါန်းမဲ့သူဆိုရင် မှတ်ပုံတင်(သို့)ကျောင်းသား/ဝန်ထမ်းကတ်ယူသွားရပါမယ်။ အမြဲတမ်းသွေးလှူတဲ့သူဆိုရင်တော့ သွေးလှူရှင်ကတ်ပြားယူဆောင်သွားရပါမယ်။ သွေးလှူမဲ့နေ့မနက်မှာ အားရှိအောင် မနက်စာအဝစားလို့ ရေ (သို့)ဖျော်ရည် များများသောက်ထားရင် သွေးလှူတဲ့အခါ သွေးရဲ့ စီးဆင်းမှုကို မြန်ဆန်စေပါတယ်။သတိပြုရမှာက ဘာမှမစားမသောက်ထားပဲမသွားပါနဲ့…..သွေးလှူပြီး မူးမော်တာ ဖြစ်တတ်လို့ပါ။
သွေးသည်အသက်၊ အသက်သည်သွေးဖြစ်လို့ သွေးလှူဒါန်းခြင်းဖြင့် တပါးသူရဲ့ အသက်တစ်ချောင်းကိုကယ်တင်ပေးပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း
မှတ်ချက်။ ။ယခုဖော်ပြချက်များမှာ’ဖတ်မိသမျှ၊မှတ်မိသမျှ’ကိုပြန်လည်ဝေငှခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းရေးသားသူ ပညာရှင် များရဲ့အမည်များကိုမမှတ်မိသဖြင့် ကိုးကားနေရာတွက်ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသည်ကို နားလည်ပေးကြစေရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ ။